TREND n'Africa mmemme mmemme na ntanetị - AfricArXiv
Otu na TREND na Africa emepụtala ndị ọkachamara nke nwere ike inyere ndị ọkà mmụta sayensị n'Africa aka ịzụlite ọrụ ha chọrọ site na mmekorita n'ịntanetị, site na ịgafe mgbochi mmegharị nke ọrịa na-efe ugbu a.
Enyemaka a na-enweta nwere ike ịbụ site na obere ọrụ obere oge na nnukwu nnwale nke na-abawanye ruo ọtụtụ ọnwa ma ọ bụ ọbụlagodi ọtụtụ afọ ma nwee ike iduga mmekọrịta mmekọrịta ga-adịte aka karịa ọnọdụ ụwa ugbu a site na ịga na saịtị na mmekọrịta mmadụ na ibe ya.
Maka ozi ọzọ na nkọwa download TREND na Ntụzịaka Njikọ Ntanetị Africa (PDF).
Site na isonye na mmemme ọhụrụ anyị, aga - ejikọ ọrụ gị na ọkachamara dị njikere ịmalite imekọ ihe ọnụ na gị! Nweta enyemaka ọzọ ma melite ịkparịta ụka n'withntanet gị na ndị ọkà mmụta sayensị si gburugburu ụwa. Ekwela oge, sonye ugbu a!https://t.co/PwK6uS0rjd pic.twitter.com/LQQl94Zqlp
- GeỌ na Africa (@TReNDinAfrica) February 19, 2021
Abụ m ọkachamara
A nabatara ndị ọkachamara nke sayensị ọ bụla, site na ụmụ akwụkwọ PhD na ndị prọfesọ, na-eche na ha chọrọ ime mgbanwe ma nyere ndị ọzọ aka imezu nrọ sayensị ha.
Ozugbo anyị natara akwụkwọ anamachọihe gị, ị ga-enwe ike ịbanye na ọdụ data anyị ka ị nwee ike ịchọta ọrụ dabara adaba na nka na oge gị.
Debanye aha dịka ọkachamara
Enwerem oru ngo
Otu dịkarịa ala mmadụ atọ nwere obere ajụjụ na obi abụọ, ma ọ bụ ọbụlagodi nnukwu ọrụ chọrọ nkwado na-adịte aka nwere ike itinye aka ịbụ onye mmekọ Africa na mmemme mmekorita nke Online.
Ozugbo anyị natara ọrụ gị, a ga-agbakwunye ya na nchekwa data ọrụ anyị ma mee ka ndị ọkachamara niile nwee ike ịchọta onye nyocha kachasị mma iji nyere gị aka na ọrụ gị.
Deba aha oru gi
Mụta ihe niile gbasara mmemme mmekọrịta TREND na trendinafrica.org/collaborations
Banyere TREND na Africa
Science na-akwado na Africa. Na TReND, anyị kwenyere na uru nke ihe omimi sayensị maka ọganihu akụ na ụba na nke obodo. Anyị na-akwado nchọpụta ọgwụ na Africa site n'inye ndị nchọpụta Africa ngwa ọrụ na nka iji kwalite ebumnuche nyocha ha.
N’ịbụ nke hibere na Mahadum Cambridge, anyị bụ otu ụlọ ọrụ na-enweghị ego na-achịkwa site na nnukwu netwọkụ nke ndị ọrụ afọ ofufo sayensị na mahadum kacha elu gburugburu ụwa. Anyị nwere mmụọ siri ike gbasara ike sayensị na ihe ọhụrụ. | trendinafrica.org